4 Ukuhombisa amaqhinga esiwafundileyo ekubukeleni iHGTV yeWhite House yeTyelelo leKrisimesi - Idesika Iiholo
Diy Kunye Nesimbo
4 Ukuhombisa amaqhinga esiwafundileyo ekubukeleni iHGTV yeWhite House yeTyelelo leKrisimesi
Ukuba uluphosile ukhenketho lwe-White House lweKrisimesi lweHGTV lonyaka ngeCawa ebusuku, ezizodwa zisinike ukujonga ngasemva kweqonga kwelona khaya lidumileyo eMelika. Kuthatha malunga ne-150 'yamavolontiya,' asebenza ubusuku nemini ukuzisa iiholide ngaphakathi kwe-1600 Pennsylvania Avenue. Ewe kunjalo, xa besebenza kwisithuba esikhulu ngolu hlobo, ezi 'elves' zifuna ukuba neendlela ezimbalwa zokuphakamisa imikhono yabo ukuze baqiniseke ukuba bayikhupha yonke into ngaphandle komthungo (nakwishedyuli). Kwaye ngelixa uninzi lweendlela zabo ezimfutshane zisebenza kuphela kwi-White House, bekukho iingcebiso ezine zokuhombisa ezinokusetyenziswa kulo naliphi na ikhaya.
Yenza ubuchule ngokuthambisa imithi.
Mibini kuphela imithi enee-toppers kwi-White House, kwaye bahlala kwigumbi loonozakuzaku. Endaweni yokusebenzisa iinkwenkwezi zemveli okanye iingelosi, abahlobisi bahamba nazo Abathwali beflegi yokhozi , Esicinga ukuba zezona zifanelekileyo.
ukhathalelo lwemithi yamaTshayina
Zama enye yale mibono yokudala imithi:
THENGA NGOKU: Umphezulu wekhephu weKrisimesi kwi-hugger yomthi, $ 35, amazon.com
THENGA NGOKU: Uphayinaphu umthi ophekiweyo, $ 48, anthropologie.com
Izibane zomthi ezijikelezayo zijikeleze amasebe.
Kulungile, siyazi ukuba bekukho impikiswano enkulu ngendlela efanelekileyo yokuxhoma izibane, kodwa sicinga ukuba eli cebiso lithatha ikeyiki. Esikhundleni sokusonga izibane ezijikeleze umthi wakho okanye uzixhome ngokuthe nkqo, amavolontiya e-White House ahlula umthi koonxantathu abathathu kwaye aluke izibane ngapha nangapha kwisebe ngalinye. Bukela ividiyo engezantsi ukuze ufunde ukuba:
Indawo yokuhlala kwigumbi lokuhlala
Khetha imicu emifutshane ukunqanda izibane ezixineneyo.
Ukuthetha ngezibane, ukuba uhlala uzifumanisa uxakekile kweyakho xa ubeka umthi, khetha imicu emifutshane, njengabahlobisi abasebenzisa kwimithi yeWhite House. Ngokufutshane umtya, kuya kuba lula ukusebenza ngawo (kwaye ugcine kamva). Ngokuqinisekileyo, oko kuthetha ukuba kuyakufuneka uthenge imisonto engaphezulu, kodwa kuba zimfutshane, kufanele ukuba zitshiphu, oko kuthetha ukuba akufuneki uve umahluko wamaxabiso.
THENGA NGOKU: Isibalo sama-35 sokubala ukukhanya kweKrisimesi, $ 11, amazon.com
Yenza 'imigxobhozo' yekhephu elingeyonyani.
Wonke umntu ufuna ukuguqula ikhaya lakhe libe yindawo emangalisayo yasebusika kunye nendlela entle yokwenza oko kukongeza ikhephu elingelolonyani kumthi wakho. Sifunde amaqhinga amabini ukuze ibonakale iyinyani ngangokunokwenzeka. Ukuba usebenza ngamaqabunga ekhephu, qalisa phezulu komthi wakho kwaye wenze amabala afana ne-puddle kumasebe. Kubalulekile ukuba uqiniseke ukuba ikhephu likumda wamasebe, ngokungathi liya kubonakala kumthi wokwenene. Ukuba usebenzisa ikhephu eliqhekekileyo, sebenzisa izandla zakho okanye i-strainer kwaye uhlunge ikhephu phezulu phezulu komthi.
THENGA NGOKU: Ingubo yokugubungela ikhephu, $ 9, amazon.com
THENGA NGOKU: Ikhephu eliqaqambileyo, i- $ 6, amazon.com
Iikhabhathi zasekhitshini zephondo laseFrance
yintoni ibha yesidlo sakusasa
amabali akho okwenyani